Obiara Renni Hia Bio—Ɛyɛ Ampa?
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Batak (Toba) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Dɛn na onyankopɔn bɛyɛ de ayi ohia afi hɔ?—Mateo 6:9, 10.
Ohia buruburoo nti, afe biara ɔkɔm ne yareɛ kunkum nnipa mpempem pii. Ɛwom, aman bi di yie, nanso ohia da so ara dokoro nnipa pii. Bible no ma yɛhu sɛ ɛnyɛ nnɛ na ohia hyɛɛ ase.—Kenkan Yohane 12:8.
Sɛ ohia to bɛtwa a, gye sɛ yɛnya aban a ɛbɛtumi ahwɛ ama asase so nneɛma akyɛ pɛ. Ade baako paa a ɛkɔfa ohia ba ne akokoakoko. Enti ɛsɛ sɛ saa aban no tumi ma akokoakoko nso to twa. Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ ɔbɛma yɛn aban a ɛte saa.—Kenkan Daniel 2:44.
Hwan na ɔbɛtumi atu ohia ase koraa?
Onyankopɔn de ne Ba Yesu asi adwa so sɛ ɔnni nnipa nyinaa so hene. (Dwom 2:4-8) Yesu bɛgye ahiafo na ɔbɛma nhyɛso ne atirimɔdensɛm nyinaa to atwa.—Kenkan Dwom 72:8, 12-14.
Bible ma yɛhu sɛ Yesu yɛ “Asomdwoeɛ Hene,” na ɔbɛma obiara anya asomdwoe ne ahobammɔ wɔ asase so. Saa bere no, obiara bɛsi ne fie atena mu, ayɛ adwuma pa. Afei ɛkɔm renne obiara, efisɛ aduane bɛbu so.—Kenkan Yesaia 9:6, 7; 65:21-23.
Yesu bɛkeka ne ho na ɔde asomdwoe aba asase so.
Sɛ aban baako na ɛdi wiase nyinaa so a, hwɛ asomdwoeɛ ne ahotɔ a yɛbɛnya. Dɛn na ɛma yɛgye di sɛ Onyankopɔn de aban a ɛte saa bɛba. Hwan na ɔfata paa sɛ ɔdi saa aban no so?